ह्याकरहरुबाट आफ्नो एकाउन्ट कसरी बचाउने? अपनाउनुस् यी उपायहरु - Technology Khabar
» ह्याकरहरुबाट आफ्नो एकाउन्ट कसरी बचाउने? अपनाउनुस् यी उपायहरु
ह्याकरहरुबाट आफ्नो एकाउन्ट कसरी बचाउने? अपनाउनुस् यी उपायहरु
Technology Khabar २९ फाल्गुन २०७७, शनिबार
हिजोआज इन्टरनेट तथा यसका माध्यमबाट गरिने विभिन्न दैनिक काम र कारोबारले हामीहरुको जीवन सहज बनाइदिएको छ।
इन्टरनेटका माध्यमबाट गर्न सकिने यी र यस्ता कामले हाम्रो दैनिक जीवनमा समयको निकै बचत गरिदिएको छ। तर यो क्रममा इन्टरनेटसँग सम्बन्धित सबै एकाउन्टहरु पासवर्डमा आधारित हुने भएकाले यदि कुनै कारणले एक जनाको एकाउन्टमा गलत व्यक्तिले पहुँच पुर्याउन पाएको खण्डमा ठूलो नोक्सानी हुन सक्छ।
यसरी राख्नुहोस् सुरक्षित पासवर्ड
कुनै पनि एकाउन्टमा पासवर्ड बनाउने बेला हामी कस्तो राख्ने भनेर अन्योलमा पर्छाैं। हिजोआज थुप्रै पासवर्ड म्यानेजर एपहरु उपलब्ध छन्। कतिपय अनलाइन सर्भिस प्रयोग गर्दा पासवर्ड र ब्राउजरमा त्यसलाई सेभ गर्ने अप्शन पनि दिइन्छ। पछि त्यही साइट खोल्दा आफैँ खुलोस् भन्ने यसको उद्देश्य हो।
पासवर्ड म्यानेजरको अवधारणा यहीँबाट सुरु भएको हो।
पासवर्डको सुरक्षाका लागि केही पासवर्ड म्यानेजर र काम लाग्ने उपायहरु यस्ता छन्:
बजारमा LastPass 1Pasword Dashlane आदि नाम गरेका पासवर्ड म्यानेजर एपहरु उपलब्ध छन्। यिनीहरु फ्री र प्रिमियम दुवै भर्जनमा पाइन्छन्।
तपाईँले आफूलाई मन परेको पासवर्ड म्यानेजर छानेर पासवर्डहरुलाई वेब ब्राउजरमा एड गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाहेक आफ्ना पासवर्डलाई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पनि गर्न सकिन्छ।
पासवर्ड सुरक्षित गर्न यी उपायहरु अवलम्बन गर्नुहोस्:
१. स्ट्रोङ पासवर्डमा मात्र भर नपर्नुस्
पासवर्ड स्ट्रोङ छ भन्दैमा सुरक्षित हुन्छ भन्न सकिन्न। त्यसैले पासवर्ड बनाएपछि २ स्टेप भेरिफिकेशनको प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ।
यसरी आफ्नो पासवर्डलाई टू स्टेप भेरिफिकेशनमा राखेपछि तपाईले अन्य कुनै डिभाइसमा एकाउन्ट लग इन गर्नुपर्दा लिंक वा कोडमार्फत प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रमाणित नगरेसम्म साइट वा मेल खुल्दैन
२. सधैं लामो र सम्झिन नसकिने खालको पासवर्ड बनाउनुस्
साना र सजिला खालका पासवर्डहरु अन्दाज गरेर पनि क्र्याक वा चोरी गर्न सजिद्यो हुन्छ। त्यसैले सधैं लामा, विशेष अक्ष्रर अंक वा चिह्न समावेश भएका अमूर्त खालका पासवर्ड बनाउनुहोस्। यस्ता पासवर्ड सजिलै नक्कल गर्न सम्झन वा चोरी गर्न गाह्रो हुन्छ।
३. पासवर्ड युनिक बनाउनुहोस्
हरेक एकाउन्टका लागि फरक फरक पासवर्ड बनाउनुहोस्। एक ठाउँमा प्रयोग गरिएको पासवर्डलाई सजिलोको लागि अन्य ठाउँमा प्रयोग गर्दा एउटा एकाउन्ट ह्याक भएको खण्डमा ह्याकरहरुले अरु एकाउन्ट पनि सजिलै ह्याक गर्न सक्ने खतरा रहन्छ।
४.पासवर्डको ब्याकअप राख्ने व्यवस्था गर्नुहोस्
सधैं मुख्य पासवर्ड ब्याकअप राख्नुपर्छ भन्ने अवधारणा बनाउनुहोस्। कुनै पनि एकाउन्टमा प्रयोग गरिएका पासवर्ड बिर्सिएको ‍खण्डमा खोजेर हेर्न मिल्नेगरी क्लाउड वा मेल आदिमा सुरक्षित राख्नुपर्छ। यसरी पासवर्डलाई ब्याकअप राखेपछि टु स्टेप भेरिफिकेशनका बेला पासवर्ट बिर्सियो भने ब्याकअपको सहायता लिन सकिन्छ।
प्रकाशित: २९ फाल्गुन २०७७, शनिबार
आईफोन प्रयोगकर्ताले एप्पलद्वारा अनुमोदित नक्कली बिटक्वाइन एपमा सबै रकम गुमाए